လင်္ကာ: လေးစားပါမယ်၊ ကာကွယ်ချင်ဘူး
မြန်မာပြည်က ကျမ်းကျိန်းစာပြဿနာဟာ လူတိုင်းကိုယ်ပြောချင်သလိုပြောလို့ရတဲ့ ကိစ္စ မျိုးဖြစ်နေလေတော့ ဒီဆောင်းပါးဟာ အဲဒီရေစီးကြောင်းကို ကန့်လန့်တိုက်ချင်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါ။
တကယ်လို့သာ သံခင်းတမန်ခင်းဆန်တဲ့ ယဉ်ကျေးပျူငှာစကားလုံးတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရမှန်ကန်မှုတွေရဲ့ တားဆီး တုပ်နှောင်မှုသာမရှိခဲ့ရင် အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများအနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်မြင်မိပါတယ်။
ဝါရှင်တန်က အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးတယောက်ရယ်၊ ဒီချုပ်က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရယ်၊ အီးယူက ထိပ်တန်းကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရယ် စကိုက်ပ်(Skype)ပေါ်မှာ တော်ကီပွားနေကြတယ် လို့ မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်ပါ။
အိမ်ဖြူတော်အရာရှိ။……….။ ကျုပ်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားတော့ လေးစားနိုင်ပြီး ဘာကြောင့် မကာကွယ်မစောင့်ရှောက်နိုင်ရသလဲဆိုတာ ကျုပ်ကို ပြောပြစမ်းပါဦး။ ကျနော်မှားသွားရင် ထောက်ပြပေးပါ။ ခင်းဗျားအနေနဲ့ တစုံတခုကို လေးစားလိုက်နာတယ်ဆိုရင် အဲဒီအရာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှာ သဘာဝမကျဘူးလားဗျာ။
ဒီချုပ်။………….။ လေးစားလိုက်နာခြင်းဆိုတာ အရှိတရားကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လည်း သက်ရောက်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ မဖြစ်မနေပြောချင်တာက အခြေခံဥပဒေကြီးတည်ရှိနေမှုကို ကျုပ်တို့ အရှိအတိုင်းလက်ခံတယ်၊ အဲဒါကြီးရှိနေမှုကို ကျုပ်တို့လည်း ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကို အသေခံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တော့ ကျုပ်တို့ ဆန္ဒမရှိဘူး။
အိမ်ဖြူ။………။ စံချိန်စံညွှန်းကိုတပြားသားမျှ မလျှော့တတ်တာကတော့ ကောင်းပါပေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ စကားလုံးကအစ ဒီလောက်အကဲဆတ်တယ်ဆိုလည်း ဘာကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့သေးလဲဗျ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကလည်း ဒီဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အထောက်အကူ အရိပ်အာဝါသအောက်မှာ ကျင်းပါခဲ့ခဲ့တာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒီချုပ်။………..။ ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီး ပွာထိုင်းပါတီ (Pheu Thai Party)ကို ဘာကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ပြန်ရေးချင်ရသလဲလို့ သွားမေးကြည့်ပါ။ သူတို့လည်း သူတို့ မုန်းလှပါချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အခြေခံဥပဒေအောက်မှာပဲ အာဏာရလာခဲ့ကြတာပဲ။ အဲဒီမှာ ပိုကြီးမားတဲ့ ထော်လော်ကန့်လန့်အဖြစ်အပျက်ကြီး ဖြစ်နေတာကျတော့ ခင်များတို့ မမြင်မိဘူးလား။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။……..။ ဟေ့ဟေ့… ဒီကိစ္စထဲ ထိုင်းကိုဆွဲထည့်မလာနဲ့။ အခုလွှတ်တော်ကို ခင်ဗျားတို့သပိတ်မှောက်တာ ကျုပ်တို့မျက်နှာ အိုးမဲသုတ်သလိုပဲ။ ကျုပ်တို့မှာတော့ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်အပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို စပြီး လျှော့ချပေးနေခဲ့ရတာ။
ဒီချုပ်။……….။ ဒီမယ် ဒီမယ် လူကြီးမင်းတို့။ လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်တော့ ဒီလို အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ပေးတာတွေ၊ အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေ လာလည်တာတွေ၊ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခင်ဗျားတို့ချီးကျူးပြောကြားနေသမျှတွေဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ပဲ ပိုသက်ဆိုင်နေပါ တယ်။ စစ်အစိုးရက ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့သမျှ ခင်ဗျားတို့က ယုံကြတာကိုး။ ဒီတော့ ဒီဆန်ရှင်ကိစ္စ ကျုပ်တို့နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။……..။ သြော်သြော်… ခင်ဗျားတို့ ဒီချုပကတော့ စစ်အစိုးရပြောတာကို မယုံခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ။ ခင်ဗျားတို့လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်လေ။
ဒီချုပ်။……..။ ခင်ဗျားတို့ကမ္ဘာအခြမ်းကနေ သိန်းစိန်အတွက် ပန်းပွားက ကပေးမယ့်လူတွေ ကျုပ်တို့ဆီက ဟိုတယ်တွေ ပြည့်နှက်သွားအောင် ချောင်းပေါက်မတတ်လာခဲ့ကြတာတွေကိုကော ကျုပ် အစပြန်ဖော်ရရင် မကောင်းဘဲရှိတော့မယ်။ ခင်ဗျားတို့ပဲ ကျုပ်တို့ကို အချက်ပြတုန်းက ပြခဲ့ပြီးတော့။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။………။ ခင်ဗျားတို့လည်း အချက်ပြခဲ့ပါတယ်လေ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီး အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့တယ်လေ။ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ လျှော့ချခြင်းဟာ ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ထဲက ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူတွေကို အထောက် အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်တဲ့။ အခုကျမှ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ငွေကို မလိုတော့ပါဘူး ပြောချင်နေတာလား။
ဒီချုပ်။………။ ခင်ဗျားငွေ နောက်ဆုံး ဘယ်သူ့အိပ်ထဲ ရောက်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာတော့ မူတည်တာပေါ့ဗျ။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။………။ကဲ..ကဲ.. နှစ်ယောက်စလုံး တော်ကြတော့။ မြန်မာအရေးဟာ ကျဆုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ အဲဒါ ကျုပ်တို့အတွက် အနိမ့်ဆုံး ရည်မှန်းချက်ပဲ။ သဘောပေါက်ပါတယ်နော်။ အာဏာရှင် အောင် ပွဲခံသွား ရင်..ကျုပ်တို့အားလုံး ရှုံးနိမ့်တာပဲ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။……….။ ကျုပ်တို့ အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကို ပြန်ပြဌာန်းလိုက်ရုံပေါ့။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။…….။ အာ…ကျုပ်တို့အားလုံး သောက်ပေါ တွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ ကဲ.. ဒီကိစ္စ အလေးအနက် ထားကြရအောင်။ ကျုပ်တို့အားလုံး အခု အရမ်းနစ်နေပြီ။ ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး အုပ်စု နှစ်ခြမ်းကွဲနေတယ်။
တခြမ်းက မြန်မာပြည်အနာဂတ် လင်းလက်နေတယ်လို့ ပြောတဲ့အပေါ်မှာ ကျုပ်တို့ယုံကြည်ထောက်ခံတဲ့ သူတွေ။ နောက်တခြမ်းက မြန်မာစစ်အစိုးရက ကျုပ်တို့ကို နှပ်ပစ်လိုက်တာ၊ လှည့်ဖြားလိုက်တာကို ဟားဖို့ အသင့် စောင့်နေကြတဲ့လူတွေ။
ဒီချုပ်။………။ ဒါဆိုလဲ ခင်ဗျားတို့ဖက်က အလေးအနက်ရှိကြောင်း ကျုပ်တို့ကို ပြလေ။ စစ်အုပ်စုကို ကျမ်း ကျိန်စာစာသား ပြောင်းဖို့ ပြော။ သူတို့ကို စာသားပြောင်းချင်ပြောင်း၊ မပြောင်းရင် နောက်ထပ် ငါးနှစ်စာ ပိတ်ဆို့မှုသက်တမ်းကို တိုးမြှင့်မယ်လို့ ပြောလိုက်။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။………။ အဲလိုလုပ်ရင် စီးပွားရေးမြှုပ်နှံမယ့်လူတွေ အများအပြား နှလုံးသွေးရပ်သွားလိမ့်မယ်။ ကဲပါဗျာ။ ကျမ်းသစ္စာကို ကျိန်မှာသာ ကျိန်လိုက်ပါ။ ကျိန်ပြီးရင် မေ့ပစ်လိုက်။ ဒီခေတ်မှာ ဘယ်သူမှ ကျမ်းကျိန်တာကို အရေးတယူ အလေးအနက်ထားနေကြတော့တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ နောက်ပြီး.. ပါလီမန်မှာ ခင်ဗျားတို့ အများစုအနိုင်ရတဲ့အချိန်ကျရင် ပြင်လိုက်လို့ရတာပဲဟာ။ အဲဒီအချိန်ရောက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတာ ထိုင်းတွေဆီက အကြံဥာဏ်တောင် ယူနိုင်သေးတယ်။
ဒီချုပ်။…..။ ထိုင်းတွေက သွေးထွက်သံယိုမဖြစ်ဘဲ လုပ်နိုင်မလားဆိုတာ သူ့တို့ဟာ သူတို့တောင် သေချာ တာမဟုတ်ဘူး။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။…….။ ကျုပ်ပြောချင်တာ အဲဒီအချက်ပဲ ဆိုတာ ခင်ဗျား မမြင်ဘူးလား။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အဖြစ် အပျက် ဟာ လူတွေ အလျှော့အတင်းမလုပ်နိုင်ကြတဲ့အခါမှာ ဘယ်လို ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတဲ့ ဥပမာကောင်း တခုပဲ။ ခင်ဗျားတို့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံရဲ့ အမှားတွေကို ခင်ဗျားတို့ ထပ်မလုပ်မိစေနဲ့။
ဒီချုပ်။……။ ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင် ခေါင်းမာဖို့တော့ လိုတယ်ဗျ။ တကယ်လို့ ပါလီမာန်စည်းမျဉ်း စည်း ကမ်းတွေကိုလိုက်နာပြီး ကျမ်းသစ္စာ ကျန်လိုက်ရင် ကျုပ်တို့ ရှုံးပြီ။ သစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ဆိုတာ အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဗျ။ အနည်းဆုံးတော့ ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်မှာ အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။
အီးယူ။……..။ ဘာသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပဲ ဆိုဆို၊ စစ်တပ်က အချိန်မရွေး အာဏာဝင်သိမ်းပြီး ခင်ဗျားတို့ကို သွားတော့လို့ ပြောနိုင်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ခင်ဗျားတို့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာ ကွယ်စောင့်ရှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးစားလိုက်နာတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးမပါတော့ဘူး။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။……။ ဘာလဲ… မြန်မာပြည်မှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူးလို့ ခင်ဗျားက ပြောချင်တာလား။ တကယ်လို့ အနာဂတ်မှာ အခြေခံဥပဒေကို ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခွင့်ရပြီး အဲဒီအချိန် လွှတ်တော်ထဲက လူနည်းစုက လက်မခံဘူးဆိုရင်ကော..
အိမ်ဖြူအရာရှိ။……။ မပြတ်ဘဲ ကျုပ်တို့ ပြောခဲ့တဲ့ အစကို တပတ်ပြန်လည်သွားနိုင်တယ်။ ဒီကနေ့ ဝေါလ်စထရိ ဂျာနယ်မှာ ရေးထားတာ ခင်ဗျားဖတ်ပြီးပလား။ အယ်ဒီတာတွေ ဘာပြောသလဲဆိုတော့ ခင်ဗျားအနေနဲ့ သင်္ကေတပိုင်းဆိုင်ရာ ကိန်းကြီးခန်းကြီးအပြုအမူတွေ ပြည့်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးမျိုးကို လုပ်ဖို့ မစွမ်းသာဘူးလို့ ပြောထားတယ်။ သူတို့က ဘယ်လိုတောင် ဟောကိန်းထုတ်လဲဆိုရင်…. ပိတ်ဆို့မှုတွေကလည်း ရုတ်သိမ်းနေတယ်၊ ခင်ဗျားတို့ကလည်းေ မှာက်ချည် လှန်ချည် လုပ်နေတယ် ဆိုရင် စစ်အစိုးရက ငွေထုပ်ပိုက်ရင် အကြီးအကျယ် ဟားတိုက်ရယ်မောနေကိန်းရှိတယ်၊ ပြီးတော့ အတိုက်အခံတွေကို အရင်ကလိုပဲ ပြန်ပြီး နှိပ်ကွပ်ကိန်းရှိတယ်… ဆိုပြီး ပြောထားတယ်။
ဒီချုပ်။…..။ ခင်ဗျားတို့က ကျုပ်တို့ကို မယုံဘဲ စစ်အစိုးရအပေါ်မှာ ပုံပြီး လောင်းကြေးထပ်တာကိုးဗျ။ အခုကျမှ ခင်ဗျားတို့ အကျိုးစီးပွားဟာ ကျုပ်တို့တာဝန်ဆိုပြီး လာလုပ်နေတယ်ပေါ့လေ။ ပြောစမ်းပါဦးဗျာ။ ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို…“စစ်အစိုးရကိုတိုက်၊ မင်းတို့နောက်မှာ ငါတို့ရှိတယ်” ဆိုတာကနေ “စစ်အစိုးရနဲ့ သင့်မြတ်အောင်နေပါ” ဆိုတဲ့အထိ ပြောင်းလဲသွားရသလဲဆိုတာ။
အီးယူကိုယ်စားလှယ်။…….။ ခင်ဗျားတို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်လေ။ အဲဒါ ဘယ်လိုပြောင်းသွားရသ လဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းပေါ့။
ဒီချုပ်။……….။ ကျုပ်တို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာက အခြေခံဥပဒေကြီးကို အသက်ပေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ပါ မယ်လို့ ကျိန်ဆိုဖို့ ဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်တို့ ဝင်ခဲ့တာက အဲဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကို ပြစ်တင် ရှုံ့ချနိုင်ဖို့ အတွက် ဝင်ခဲ့တာ။
အိမ်ဖြူအရာရှိ။…….။ အဲဒါ လေးစားလိုက်နာဖို့အတွက် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲလား။
ဒီချုပ်။………..။ ထင်ချင်သလို ထင်ဗျာ။
source: Kyi Kyi Khin facebook
Here's my take on what the people who matter may want to say to one another if there was no hindrance of diplomatic etiquette and political correctness.
ImagineaSkype conference betweenasenior Washington official,aNational League for Democracy spokesman andatop European Union representative.
NLD spokesman: Respect can also mean to acknowledge the existence of. We essentially want to say we accept that the Constitution is there and we can't do anything about it, but we are not willing to die in defence of the charter.
White House official: It's great to be idealistic. But if to be symbolic about the charter is so important, why did you participate in the election, which was held under the auspices of this Constitution to begin with?
NLD spokesman: Go to Thailand and ask why the Pheu Thai Party wants to writeanew Constitution. They've won power underaConstitution they hate. Don't you seeabigger irony there?
EU representative: Don't bring Thailand into this. Your boycott of parliament opening almost puts egg on our faces. We were easing sanctions against your country, for God's sake.
NLD spokesman: With all due respect, sir, it seems to me that the whole sanctions lifting, high-profile visits and singing of Myanmar's praises have more to do with the junta. You bought what the junta told you would happen. It has little to do with us.
EU representative: As if you didn't buy what the junta told you as well. You competed in the election.
NLD spokesman: Do you want me to recount how many Thein Sein cheerleaders from your part of the world have jammed our hotels? You gave us the signals.
EU representative: You did, too. Your leader Aung San Suu Kyi said that easing of sanctions would help reformers in your country. Are you now saying you don't need our money?
NLD spokesman: It depends on where your money ends up.
White House official: Knock it off, you two. Myanmar can't fail. That's our bottom-line. Do you understand? If dictatorship prevails, we'll all lose.
EU representative: We'll just re-impose sanctions.
White House official: And make us all look likeabunch of fools? Let's get serious. We're in too deep now. The whole world is divided into those who believe us on the bright future of Myanmar and those who are ready to laugh if the junta is taking us foraride.
NLD spokesman: Show us you are serious then. Tell the junta to change the parliamentary oath. Tell them change it or five more years of sanctions.
White House official: That would give many investors heart attacks. Come on. Just say the oath and forget about it. Nobody takes any oath seriously anymore. Besides, you can change it later when you get majority control of Parliament. When the time comes, you can get Thai advice on how to do it.
NLD spokesman: The Thais aren't even sure they can do it without bloodshed.
White House official: That's the whole point, don't you see? Thailand is Exhibit A of what happens when people can't compromise. Don't repeat your neighbour's mistakes.
NLD spokesman: You have to be stubborn to get democracy. If we obey the parliamentary rules and say the oath, we lose already. A pledge of allegiance isabig deal. At least it is in your country.
EU representative: Whatever pledge you take, the military can come in and say you're done. If that happens, it won't matter whether you protect or respect the Constitution.
White House official: True. Just ask Thailand.
NLD spokesman: They have problems because they don't really care about their Constitution. They don't think of their charter in terms of common values; they just change their highest law back and forth to serve themselves and neutralise enemies.
White House official: Are you telling us it's different in Myanmar? What if you manage to write your own Constitution in the future andaminority bloc in Parliament doesn't accept it?
NLD spokesman: We'll just tell them to respect it. Case closed.
White House official: Or we are back where we started. Haven't you read The Wall Street Journal today? Its editorial says you can't afford the politics of symbolic grand gestures. They even suggest that with sanctions easing and you flip-flopping, the junta might be laughing all the way to the bank and go back to persecuting the opposition again.
NLD spokesman: You guys bet on the junta, not us. Now your stakes are our responsibility, eh? Tell me, how did it go from fight-the-junta-and-we-are-behind-you to try-to-get-along-with-the-junta?
EU Representative: You ran in the election; that's how.
NLD spokesman: We didn't do that so we could swear we will die protecting the Constitution. We did it so we can condemn it.
White House official: You mean respect it?
NLD spokesman: Whatever.